Samsung Galaxy S oo wata Movistar laga bilaabo Julaay laga bilaabo € 0 | Androidsis
Movistar ayaa si rasmi ah u shaacisay wararka sheegaya in usbuucii hore waxaan ku ogeynay kanaalkiisa rasmiga ah ee Twitter, Samsung Galaxy S wuxuu noqon doonaa terminal -kaaga Android xiddig laga bilaabo Julaay.
Laga soo bilaabo clippset Waxaan akhrinay in terminaalka la heli doono laga bilaabo 1da Luulyo. Terminalku wuxuu xor u noqon doonaa qaadista iyadoo bishiiba la bixinayo € 29,9 cod iyo € 15 oo ah heerka xogta ama laga soo qaatay liistada dhibcaha laga bilaabo 103.000 dhibcood oo lagu daray € 59. Qeybinta billaha ah ee € 19,9 ee codka iyo xaddiga xogta ee € 10 bishii, qiimuhu wuxuu noqon doonaa € 59.
Intaa waxaa dheer, Terminal -kan waxaa laga heli doonaa Movistar in kasta oo Vodafone ay hore ugu dhawaaqday isla Terminalkan Boqortooyada Midowday waana inaan fiiro gaar ah u yeelanno si aan u aragno nooca gaarka ah ee Movistar leeyahay.
Movistar ayaa ka soo warbixin doonta tan 13:30 duhurnimo iyada oo u sii marin doonta kanaalkeeda Twitter -ka, waxaan sii wadi doonnaa cusboonaysiinta wararka.
UPDATED: Waa kan warsaxaafadeedka rasmiga ah. Guji sawirada si aad u weynaato
Madrid, Juun 18, 2010 - Samsung Electronics Co. Ltd., oo ah shirkad hormuud ka ah taleefanka gacanta, iyo Movistar ayaa maanta soo bandhigay Galaxy S (GT-I9000) cusub, oo ah kan ugu awoodda badan taleefanka gacanta ee Android ee suuqa. Macaamiisha guur -guura ee Telefónica waxay awoodi doonaan inay ka iibsadaan si gaar ah laga bilaabo 1 -da Luulyo oo keliya iyada oo loo marayo kanaalada caadiga ah laga bilaabo 0 euro markii la siinayo qandaraaska sicirka ee Mobile Internet Plus (15 euro / bishii), iyo qorshaha codka 29,9 euro bishii.
Sababtoo ah sifooyinkiisa, shaqayntooda iyo suurtogalnimadiisa, Galaxy S ayaa ah furaha ugu muhimsan sanadka labada shirkadoodba: waa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh 4 ”shaashad Super AMOLED; Nidaamka hawlgalka Android 2.1 iyo processor 1GHz; GPS-ka Navigation-ka cusub ee Google-ka ku dhisan ee caadiga ah iyo nooca gaarka ah ee Layar (codsi dhab ah oo la kordhiyay oo ku saleysan meelaynta) oo si gaar ah loogu talagalay Samsung oo leh nuxur gaar ah, dhammaantoodna dhumucdiisuna tahay 9,9mm. Tilmaamahan waxaa dhammaystiray Swype (arjiga qoraalka ugu dhaqsaha badan ee la heli karo) iyo is -dhexgalka wireless -ka “AllShare ™” iyada oo loo marayo DLNA (oo leh aalado kala duwan, sida laptops, telefishanno iyo kamarado).
"Galaxy S waa badeecadii ugu weyneyd ee sannadka 2010 ee Samsung Mobile. Kaliya shirkad u heellan hal -abuurka ayaa bixin karta Smartphone, ku saleysan Android, oo leh astaamahan oo dhan. Kuwani waxay ka dhigaan aaladda ugu farsamada badan suuqa ”, ayuu yiri Celestino Garcia, oo ah agaasimaha qeybta isgaarsiinta ee Samsung Electronics Iberia.
Galaxy S waxaa laga heli doonaa 0 euro oo loogu talagalay isticmaaleyaasha ka imanaya shirkadaha kale ee guurguura iyagoo shaqaaleysiinaya mid ka mid ah qorshayaasha codka movistar 29,90 euro / bishii iyo sicirka guryaha Internetka Mobile Plus -15 euro / bishii. Intaas waxaa sii dheer, kiiskan, waxay awoodi doonaan inay si toos ah u daawadaan oo lacag la'aan ah ciyaaraha Kubbadda Cagta Adduunka 2010 ee loo maro Digital + mobile dhexdeeda TV qiiro leh.
Haddii macmiilku doorbidayo inuu qandaraas ku sameeyo sicirka xogta guri ee 10 euro / bishii, iyo qorshe cod oo ah 19,90 euro / bishii, wuxuu ku iibsan karaa aaladdan cusub 59 euro.
Kuwii horeba u ahaa macaamiisha Movistar oo u mahadnaqaya barnaamijka daacadnimada dhibcaha shirkadda, Samsung Galaxy S wuxuu ka kici doonaa 0 euro iyadoo ku xiran dhibcaha la uruuriyay iyo haddii aad shaqaaleysiiso qiime xog. Tusaale ahaan, adoo iska diiwaangelinaya sicirka Internetka moobaylkaaga, waxaad ku heli kartaa 130.800 dhibcood € 0 oo leh ballan qaad 24-bilood ah inaad joogtid.
Movistar waxay u fidin doontaa dalabyada cusboonaysiinta taleefanka casriga ah macaamiisheeda hadda, gaar ahaan kuwa ay ka harsan yihiin wax ka yar 3 bilood inay ku dhammaystiraan ballanqaadkoodii ahaa inay sii joogaan, kuwaas oo lagu abaalmarin doono daacadnimadooda dhibco xayaysiis ah si loogu beddelo boosteejooyinka ugu fiican qiimo aad u soo jiidasho leh .
Federico Rava, oo ah agaasimaha Degaanka Telefónica Spain, ayaa tilmaamaya taas "Android waa, shaki la'aan, nidaamka qalliinka oo si aad ah ugu kobcin doona sannadaha soo socda taleefannada casriga ah, sida ay qabaan dhammaan falanqeeyayaasha. Iyo Movistar wuxuu shaki ku jiraa inuu ku xigi doono aaladaha ugu fiican, sida Samsung Galaxy S, si uu ugu soo bandhigo ka hor shirkad kasta macaamiisheeda".
Shaashadda ugu fiican suuqa
Terminalka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka qayb gasho adduunyo badan oo warbaahin ah. Shaashadiisa weyn ee 4 ”Super AMOLED waxay bixisaa tayada ugu fiican suuqa oo bixisa 20% iftiin dheeraad ah, 80% milicsiga ka yar, 20% isticmaalka batteriga oo yar, xagal daawasho ku dhawaad ​​180º iyo jawaab aad u taabasho badan.
Dhinaceeda, mDNIe (mobilada dhijitaalka ah ee dhijitaalka ah ee dhijitaalka ah) - teknolojiyad loo adeegsado Samsung LED iyo telefishannada LCD - waxay bixisaa sawirro cad oo cad marka la daawanayo sawirrada, fiidyowyada iyo buugaagta elektaroonigga ah. Hadda oo cimiladii fiicnayd soo socoto, mar dambe ka welwelin mayno milicsiga aan raaxo lahayn markaan shaashadda u bandhigeyno iftiinka qorraxda.
1 GHz processor -ka cusub ee Galaxy S (model Cortex A8 version 111) waxaa soo saaray Samsung gabi ahaanba. Awoodda processor -kan waxay dammaanad qaadeysaa tayada muuqaalka qeexitaanka oo aad u sarreeya oo leh xawaare aad u weyn sidaa darteedna, fulinta dalabyo badan isla waqti isku mid ah waa la dammaanad qaadayaa: dir SMS, cayaar fiidiyow, soo dejiso muusig, daawado trailer, internet samee raadi, hel wicitaan ...
Samsung Galaxy waxay ku saleysan tahay nidaamka hawlgalka Android 2.1 sidaa darteedna waxay leedahay codsiyada laga helo Android MarketÔ. Tani waxay u oggolaaneysaa inay sii ballaariso faa'iidooyinka aaladda, taas oo ay u dheer tahay inay kujirto helitaanka adeegyada moobaylka GoogleÔ (sida Google SearchÔ, GmailÔ, Khariidadaha Google, Navigation Google, Raadinta Codka). Hadda wixii ka dambeeya waxaan u sheegi karnaa Smartphone -kayada inuu na geeyo meesha aan rabno ama aan internetka ka raadinno boodhka filimka oo keliya codkeenna. Looma baahna in la qoro mar dambe!
Layar: Dhammaan macluumaadka ku yaal iyo calaacasha gacanta
Layar waa codsi dhab ah oo la kordhiyay kaas oo kuu oggolaanaya inaad qeexdo raadinta goob-ku-saleysan ee caadada u ah. Markaa, xawaare aad u sarreeya, marka la galayo hawshan shaashadda terminal waxay muujineysaa macluumaadka dhabta ah ee la kordhiyay ee mid walba u baahan yahay waqti kasta iyo goob kasta, isagoo tilmaamaya meesha saxda ah ee barta xiisaha (saldhigyada gaaska, makhaayadaha, farmashiyeyaasha ...) iyo dhammaan faahfaahinta (cinwaanka, masaafada, taleefanka ...). Nooca Layar ee Galaxy S wuxuu ku darayaa Qodobbada Xiisaha gaarka ah (POI) ee Samsung oo laga soo saaray heshiis caalami ah oo lala saxiixday TeleAtlas si loogu daro waxyaabaha gaarka ah ee khariidadaha Galaxy S, si weyn u kobcinaysa waxyaabaha uu adeegsaduhu ka heli karo qalabkaaga.
Swype, dalabka leh rikoorka adduunka
Galaxy S wuxuu ku qalabaysan yahay Swype, oo ah kacaan dhaqso badan oo nidaam qoris ah oo loo dejiyay inuu noqdo heer caalami oo cusub. Tan waxaa lagu muujiyey Diiwaanka Guinness ee xawaaraha qoraalka farriimaha qoraalka ee lagu garaacay terminal Samsung bishii Maarso ee la soo dhaafay.
Wada shaqaynta aaladaha oo kale oo aan hore loo arag
Terminalka cusub wuxuu si miyir leh oo sahlan u dhexgelinayaa dhammaan dhinacyada nolosha. Shaqadeeda AllShare ™ waxay u oggolaaneysaa isku -xirnaanta iyada oo loo marayo DLNA (Digtal Living Network Alliance) heerka shabakadda guriga oo leh aalado kala duwan oo kala duwan, sida laptops, telefishanno iyo kamarado, iyagoo awood u leh inay is -weydaarsadaan macluumaadka dhexdooda si fudud, dhaqso ah oo aan u baahnayn fiilooyin.
Marka lagu daro dhammaan astaamahan, Galaxy S wuxuu leeyahay shaqooyin kale oo badan oo isku dhafan sida caadiga ah, Soo koobid maalinle ah, bixinta deg deg ah wararka cimilada, macluumaad guud, kaydka, iyo qorsheeyaha hawsha; Sharax oo share dheh, si dhaqso ah fikrad loo qoro oo hadhowna loo go'aamiyo qaabkeeda sida SMS / MMS, emayl, kalandar ama qoraal; ThinkFree, codsiyada daawashada iyo tafatirka dukumiintiyada Microsoft Office 2007 ama Alaarmiga caqliga leh, in lagu tooso dhawaaq dabiici ah oo si toos ah loo shido iftiinka muujinta.
Miiska dhibcaha iyo qiimaha xatakamovil
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S oo leh Movistar laga bilaabo July laga bilaabo from 0
maadaama Vodafone Spain aysan toosin waxaan la helayaa Movistar.
Ma ogtahay haddii ay waqti dheer qaadan doonto in Vodafone ay ku dhawaaqdo?
@rada ayaa si cad ugu sheegaysa wararka:
“… Macaamiisha mobilada ee Telefónica waxay awoodi doonaan inay si gaar ah u iibsadaan laga bilaabo 1da Luulyo ..»
Haddii ay tahay mid gaar ah tartanka weli waa inuu sugaa ugu yaraan dhowr bilood.
Aad bay qaali u tahay waayo haddii aan m